WithinReach waxay u fududaynaysaa qoysaska Washington inay maraan nidaamyada caafimaadka iyo adeegyada bulshada ee kakan oo ay ku xidhmaan agabka ay u baahan yihiin si ay u ahaato mid caafimaad iyo badbaado leh. Waxaan mid-ka-mid ula shaqeynaa dadka - qof ahaan, taleefanka iyo khadka - si aan u aqoonsano yoolalkooda oo aan u siino taageero degdeg ah oo guriga u dhow. WithinReach waxay kaloo la shaqeysaa la-hawlgalayaasha, bixiyeyaasha, iyo siyaasad-dejiyeyaasha siyaabo kala duwan si loo kala hormariyo qoysaska iyo carruurta. Waxaan diiradda saarnay horumarinta helitaanka agabka iyo taageerada sababtoo ah waxaan aaminsanahay in dhammaan qoysaska iyo carruurta ay ka faa'iideystaan macluumaadka dhamaystiran oo dhamaystiran si ay ugu socdaan caafimaadka, cuntada, iyo nidaamyada carruurnimada hore si guul leh.
Kooxdayadu waa caqli iyo ujeedo. Waxaan nahay isbedel-sameyaal, ka shaqeyneynaa inaan dhisno bulshooyin caafimaad qaba, sinnaan leh, firfircoon. Waxaan aaminsanahay in aan kaliya si fiican u qabsan karno shaqadeena innaga oo baranaya oo ka tarjumaysa dadka aan u adeegno iyada oo loo marayo xoogga shaqada iyo horumarinta hoggaaminta iyo in aan raadino aqoonsiga iyo yareynta nidaamka iyo helitaanka caqabadaha ka qaybqaata sinnaan la'aanta qaabdhismeedka. Markaan sidaas yeelno, waxaan awoodnaa inaan u abuurno isbeddel macno leh qoysaska iyo bulshada.
Booska oo kooban: Navigator Ilaha Qoyska wuxuu u adeegaa sidii meesha ugu horeysa ee lagala xiriiro qoysaska Degmada Skagit si ay u raadsadaan macluumaadka ku saabsan ilaha deegaanka iyo kaalmaynta helitaanka barnaamijyada dheefaha dadweynaha. Navigator Ilaha Qoyska wuxuu taageeraa qoysaska uurka leh iyo qoysaska leh caruur yar yar ilaa 6 sano jir. Navigator Ilaha Qoyska waxa uu u adeegaa sidii marin u dhexeeya qoysaska iyo agabka iyada oo loo sii marayo WithinReach's Help Me Grow Washington Hotline. Waxaan isticmaalnaa xog uruurin isku dhafan oo ku saleysan mareegaha, taleefanka, iyo teknoolojiyadda isgaarsiinta si aan qoysaska ugu xirno barnaamijyada horumarinta carruurta, ilaha taageerada waalidka, kaalmada cuntada, caymiska caafimaadka, iyo ilaha kale ee bulshada deegaanka. Navigator Ilaha Qoyska waxaa tababari doona shaqaalaha WithinReach shaqada kiiska taleefanka, maadooyinka caruurnimada hore, hababka daryeelka caruurnimada hore ee khuseeya, Kala duwanaanshaha, sinnaanta & ka mid noqoshada, xog ururinta, iyo dhaqamada ugu wanaagsan ee hagidda ilaha. Navigator Ilaha Qoyska wuxuu degi doonaa Degmada Skagit ama agagaarkeeda wuxuuna taageeri doonaa qoysaska Skagit ee doonaya adeegyada Help Me Grow.
Waajibaadka Guud iyo Waajibaadka:
Mas'uul ka ah ka jawaabista taleefoonka, webka, qoraalka, iyo iimaylka weydiimaha si ay u bixiso wakhtiga, ku haboon, iyo macluumaadka saxda ah iyo taageerada qoysaska gargaar doonka ah.
Bixi ilo ku habboon dhaqan ahaan iyo luqad ahaanba iyo iskudubarid daryeel, oo isticmaal adeegyada turjumaanka marka loo baahdo.
Jawaab caruurnimada hore su'aalaha, ku xidh kuwa soo wacaya baadhista korriinka ilmaha ee bilaashka ah, oo bixi iskudubarid daryeel iyo kaalmo dabagal ah.
Aruurinta macluumaadka qaadashada qoyska, dukumeenti dhammaan hawlaha isuduwidda daryeelka Help Me Grow ee qoysaska, iyo la socoshada soo wacayaasha iyo wakaaladaha lammaanaha.
Si wada jir ah uga shaqee wakaalado badan, koox edbin badan oo kor u qaada is ixtiraamka, isgaarsiin furan, iyo xeeladaha xalinta mashaakilaadka wadajirka ah.
Caawimo si loo joogteeyo, loo cusboonaysiiyo, looguna daro kaydka kaydka korriinka ilmaha iyo tixraacyada.
Ka qaybgal shirarka Golaha Carruurta ee Golaha Deegaanka ee Skagit ee billaha ah iyo sidoo kale shirarka kooxda waxqabadka Help Me Grow ee maxalliga ah. Ka wakiil Help Me Grow isbahaysiga beesha deegaanka, kooxaha xaafadaha iyo shabakadaha sida ugu habboon.
Ka qayb qaado kooxda WithinReach ee caadiga ah iyo dhammaan shirarka shaqaalaha.
1-3 sano oo waayo-aragnimo ah oo si toos ah ula shaqaynaysa qoysaska dakhligoodu hooseeyo, kala duwan iyo dhaqamo badan
Aqoonta agabka iyo barnaamijyada Degmada Skagit iyo waayo aragnimada la shaqaynta bulshada
Laba luqadood oo Isbaanish ah
Shuruudaha la rabo:
Caafimaadka caruurnimada hore iyo aqoonta horumarka
Khibrad u leh waxbarashada carruurnimada hore, daryeelka caafimaadka, adeegyada bulshada ama goob la xiriirta
Aqoonta ilmaha iyo qoyska iyo/ama nidaamyada bixinta daryeelka caafimaadka iyo ilaha bulshada ee Degmada Skagit
Aqoonta barnaamijyada gobolka oo dhan sida Cuntada Aasaasiga ah (SNAP), Taageerada Hore ee Dhallaanka iyo Dhallaanka, WIC, iyo Medicaid.
Aqoonta ama waayo-aragnimada samaynta iskaashi lala yeesho ururada adeegga bulshada ee maxaliga ah.
Xarunta wacitaanka iyo/ama khibradda adeegga macaamiisha ee ku habboon.
Labada dhaqan ayaa doorbiday
Waxa uu degan yahay Degmada Skagit laakiin waxa uu degi karaa nawaaxigeeda hadii musharraxa uu aqoon u leeyahay agabka Skagit iyo baahiyaha bulshada
Xirfadaha & Kheyraadka Loo Baahan Yahay:
Dhagaysi heer sare ah, isgaarsiin, iyo xirfado xalinta mashaakilaadka si si haboon loo qiimeeyo baahiyaha macmiilka loona bixiyo agabka iyo macluumaadka khuseeya, iyo kaalmada diiwaangelinta.
Awood u lahaanshaha si wax ku ool ah loola macaamilo dadka kala duwan iyo bulshooyinka Degmada Skagit.
Xirfado xoog leh oo dadka dhexdooda ah iyo karti la muujiyay in lagu shaqeeyo oo si wax ku ool ah loola xiriiro dadka dhaqan, qowmiyadeed, luqadeed iyo dhaqan-dhaqaale ee kala duwan.
Maareynta waqti wax ku ool ah, kala hormarinta iyo xirfadaha hawlo badan.
Awoodda loo maareeyo mas'uuliyadda si madax-bannaan oo ay ula shaqeyso kormeer xaddidan, iyo sidoo kale jawi kooxeed.
Awoodda lagu dhegeysto macluumaadka marka la ururinayo oo la gelinayo xogta hababka maaraynta macmiilka.
Helitaanka adeeg internet oo la isku halayn karo (Lagu taliyay ugu yaraan 25mpbs si loo helo tayada codka iyo maqalka ee wanaagsan).
Mushaharka & Faa'iidooyinka: $20 saacadii,Wakhti buuxa, 40 saacadood/toddobaadkii. Faa'iidooyinka ugu wanaagsan waxaa ka mid ah caymiska caafimaadka ee si buuxda loo bixiyo, aragga, iyo ilkaha ee shaqaalaha iyo caymiska deeqsinimada leh ee lammaanaha, lammaanaha iyo kuwa ku tiirsan. Wakhtiga fasaxa la bixiyay iyo qorshaha hawlgabka ee loo shaqeeyaha ku habboon. Lacagta internetka ee bishii $30 ayaa la bixiyaa.
Goobta Shaqada: Shaqo fog oo leh suurtogalnimada mustaqbalka ee xarun shaqo oo ku taal Matxafka Carruurta ee Degmada Skagit ka dib xannibaadaha COVID waa la tirtiray ama la dhimay. Xafiiska WithinReach wuxuu ku yaalaa 155 NE 100th Street, Suite 500, Seattle, WA 98125
Taariikhda xidhitaanka: TBD
WithinReach waxay taageertaa ka mid noqoshada iyo kala duwanaanta noocyadeeda kala duwan. Waxaan ku dadaaleynaa inaan abuurno jawi nabdoon oo furan. Waxaa naga go'an inaan dhageysanno, matalo oo aan isku duubno aragtiyo iyo khibrado kala duwan dhammaan waxa aan sameyno.
WithinReach waa Loo-shaqeeye Loo Siman Yahay. Waxaan raadineynaa inaan siinno dhammaan dadka fursad siman iyada oo aan loo eegin jinsiyadda, da'da, midabka, diinta, jinsiga, muujinta jinsiga, xaaladda guurka, nooca galmada, heerka milatari, asal qaran, ama sifo kasta oo kale oo lagu ilaaliyo sharciga. Dadka midabka leh iyo xubnaha bulshada LGBTQ waxaa si adag loogu dhiirigelinayaa inay codsadaan. Waxaan u heellannahay inaan kobcino shaqaale kala duwan oo u adeega oo ka tarjumaya bulshadeena.
Dhammaan macluumaadkaaga waxaa lagu ilaalin doonaa sir iyadoo la raacayo tilmaamaha EEO.